‘यो त भएन, मेरो कुर्सी छोड कसरी भनौं दाई’ – YesKathmandu.com
‘यो त भएन, मेरो कुर्सी छोड कसरी भनौं दाई’
बिहीबार २२, माघ २०७१
काठमाडौं । बूढा आउँछन्, ढसमस्स आफ्नो कुर्सीमा बसिदिन्छन् । ‘छोड्नुस्’ भन्न पनि नमिल्ने । नभनौँ, आफ्नो हक लाग्ने कुर्सीमा बसिदिने । राप्रपा संसदीय दलका नेता दीपक बोहरालाई अहिले यो तनाव छ । वरिष्ठ नेता सूर्यबहादुर थापा संसदीय दलका नेता बोहरा बस्ने कुर्सीमा बस्न थालेपछि उनलाई यो तनाव शिर्जना भएको हो ।
तर, भएर के गर्नु, जब वरिष्ठ नेता थापा पुग्छन्, उनी नै गएर बसिदिन्छन्, कुर्सीमा । बूढासँग बाझ्न पनि भएन । त्यत्रो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर संसदीय दलको नेता भएका बोहरा यो कुराले निकै खिन्न छन् । त्यसमाथि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा आफूलाई कांग्रेस र एमालेले ‘बाल मतलब’ नगर्दा उनी झनै क्रुद्ध छन् । सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा पार्टी अध्यक्षका हैसियतले अध्यक्ष पशुपतिसमशेर ‘बिन बुलाए मेहमान’ जस्तो भएर पुगेपछि संसदीय दलको नेता हेरेको हे¥यै भए । बोहराले केही समयअगाडि कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीसँग दुखेसो पोखे, ‘संसदीय दलको नेता म । मेरो कुर्सीमा सूर्यबहादुर बूढा आएर ढसमस्स बसिदिन्छन् । गठबन्धनको बैठकमा पशुपति पुगिदिन्छन् । यो त राम्रो भएन दाइ ।’ अर्जुनले यो कुरा सत्तारुढ गठबन्धनमा पु¥याए कि पु¥याएनन् तर अहिलेसम्म पनि गठबन्धनको बैठकमा राप्रपाको तर्फबाट बोहरा हैन, सूर्यबहादुर नै बोलाइन्छन् । बाटो छेकेर ‘तपाई हैन, म जान्छु’ भन्न भएन, नभनेर पनि कति दिन सहने ?’ अप्ठेरोमा छन्, उनी ।
उता, काली नागको आतंकले राप्रपामा हलचल मच्चिएको छ । पत्रकारिता पेशाका पाँचाँै पतिसँग सम्बन्ध टुटेपछि अहिले राप्रपाका अनुदार नेतासँग नजिकिने उनले केटाहरूसँग कुरा धुतेर दीपक बोहरालाई सुनाउने भनी आतंक मच्चिएको हो । उनको नाम अर्कै छ, तर कुरा गर्दा ‘काली नाग’ भनेर चिनिन्छ । गोरखाको बोहरा गाउँ माइत भएकी उनले केटाहरूलाई तन्त्र लगाएर आफ्नो बसमा पार्ने गरेको चर्चा राप्रपामा चल्ने गरेको छ ।
त्यस्तै, धादिङको एक कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका एउटै पार्टीका नेताबीच धर्मनिरपेक्षताको कुरा बाझिँदा बबाल भएको छ । भुवन पाठक र हेमजंग गुरुङ सहभागी कार्यक्रममा भुवनले धर्म निरपेक्षताको विरोध गरे भने गुङले धर्म सापेक्षताको वकालत गरे ।
त्यो भन्दा पनि चर्को विवाद छ, आयल निगममा डिभिजनल इञ्जिनियर गोपालबाबु खड्काको नियुक्ति । हल्ला छ, गोपालबाबुले पार्टीलाई दुई खोका बुझाएका छन् । त्यसमध्ये मन्त्री सुनीलबहादुर थापाले एउटा खोका सर्लक्कै खाइदिए । अर्को खोका पार्टी अध्यक्ष पशुपतिसमशेरकहाँ पुग्यो । र, त्यो रकम त्यस्ता मानिसलाई बाँडियो जसले सुनीललाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ भनेर पार्टीमा कुरा उठाइरहेका छन् ।
बाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री गिरिबहादुर केसीले त नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडमा २० लाख खाएर माओवादीका हेमबहादुर विसीलाई नियुक्ति गरेको हल्ला पनि हलो पार्टीमा निक्कै चलेको छ ।
बाबुरामको कथन : नेपालमा सबैभन्दा छुद्र मानिस को हो भनेर बालबालिकालाई सोधे केपी ओली भन्छन्
प्रचण्डको फोनमा कोइरालाको घण्टी
रातारात यसरी प्रचण्डले आफ्नो मतान्तर बढाए
संविधानको मर्मविपरीत रमण श्रेष्ठलाई ‘सम्मानार्थ महान्यायाधिवक्ता’ को भूमिका
सभामुख र उपसभामुखले दिए राजीनामा
सभामुखलाई एक सय सभासद्ले भने ‘तपाई नडगमगाउनुस्’
पोखरेल, ज्ञवाली र पौडेल – को बन्ला अर्थमन्त्री ?
विभाजनको राजनीति स्वीकार्य छैनः महत
हिन्दुराष्ट्र समाप्त पार्ने अनि रामराज्य खोज्ने ?
आखिरीमा नारदमुनिले पछारे आर्जु देउवालाई
प्रहरीद्वारा नौ थान हतियार बरामद